အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝရပ်တည်မှုတွေအကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ ဖတ်ရှုရမယ့် "နွေကန္တာ၊ မြကတ္တီပါလမ်းမှသည် မဟာရံတံတိုင်းဆီသို့" - For her Myanmar
ဘာသာပြန်ကိုမှ ဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ စိတ်အာဟာရပေးတဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်ချင်တဲ့ ယောင်းလေးတွေ လက်ညှိုးထောင်…
အမျိုးသမီးတွေဆိုတာ ဦးဆောင်နိုင်သူတွေမဟုတ်လို့ အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းပီသအောင်ပဲ ကြိုးစားသင့်တယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆကို အက်ဒ်မင်အမြဲ သံသယဖြစ်မိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဆိုတာ ကမ္ဘာမှာလည်း အများကြီး ရှိခဲ့ဖူးတာ မဟုတ်လား…
တစ်ယောက်ယောက်ကို အားကိုးပြီး မှီခိုနေရာကနေ ရှေ့ကနေဦးဆောင်ရတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ ယောက်ျားသားတွေတောင် အံ့သြယူရအောင် အရာရာကို ဦးဆောင်ဖြေရှင်းပြသွားတဲ့ မိန်းမတွေလည်း အများကြီးမဟုတ်လား။
ဒီသဘောကို ကလောင်စွမ်းကောင်းကောင်းနဲ့ သရုပ်ဖော်ပြသွားတဲ့ စာရေးဆရာတွေဆိုတာလည်း အများကြီးရှိပါတယ် ယောင်းတို့ရေ… အဲ့ဒီအထဲကမှ အမေရိကန်စာရေးဆရာမ ဂွင်း ဘစ်စထရို ရဲ့ ဂန္ထဝင် ဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ “Deep Summer, The Handsome Road, This Side of Glory” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို မြန်မာစာရေးဆရာ တင်မောင်မြင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ “နွေကန္တာ၊ မြကတ္တီပါလမ်းမှသည် မဟာရံတံတိုင်း ဆီသို့” ဆိုတဲ့ စာအုပ်အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဒီ ဝတ္ထုထဲက ဇာတ်ဆောင်တွေ ကလည်း အများသားပါပဲ။ များဆို မိသားစုတစ်ခုကနေ ပေါက်ပွားလာတဲ့ မျိုးရိုးတစ်ခုက မိန်းမသားတွေရဲ့ စရိုက်အစုံစုံ၊ အရည်အချင်းအဖုံဖုံ၊ ဘဝရပ်တည်မှု အသွယ်သွယ်ကို ဖော်ကျူးပြသထားတဲ့ ဝတ္ထုဖြစ်နေတာကိုး…
တကယ်လို့များ ယောင်းတို့က လေရူးသုန်သုန်ဆိုတဲ့ ဂန္ထဝင်ဝတ္ထုကို ဖတ်ဖူးထားရင် ဒီဇာတ်လမ်းကို ပိုခံစားတတ်မှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီဝတ္ထုဟာ လေရူးသုန်သုန် ဇာတ်လမ်းထဲကလို အမေရိကန် ပြည် တောင်ပိုင်းဒေသက မြေရှင်ယာရှင်ကြီးတွေရဲ့ ခမ်းနားကြီးကျယ်မှု နဲ့ သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ နေထိုင်မှုတွေအကြောင်းအခြေခံထားတာမို့ပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ မြေရှင်တွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကြီး စတည်ထောင်ကာစကာလ၊ အားအကောင်းဆုံးကာလ၊ စတင်ပြိုလဲတဲ့ ကာလ နဲ့ ဒီယဉ်ကျေးမှုကြီးရဲ့ အဆုံးသတ်ကာလအထိ ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။ နောက်ပြီး မြေရှင် လူဖြူလူချမ်းသာတွေရဲ့ ဘဝ၊ သူတို့နဲ့ မယှဉ်သာအောင် ဆင်းရဲနုံချာနိမ့်ကျလှတဲ့ လူဖြူအောက်ခြေလူတန်းစားတွေရဲ့ ဘဝတွေကိုလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။
Related Article >>> စုံထောက်ဝတ္ထုကောင်း နှစ်သက်သူတိုင်းအတွက် ရန်အောင်ရတနာဝတ္ထု
ဇာတ်လမ်းက ဒီလို စတင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
ဂျူးဒစ် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး နဲ့ ဖီးလစ် ဆိုသူတို့ ဖူးစာဆုံပြီးတဲ့နောက် အမေရိကန်နိုင်ငံရယ်လို့မဖြစ်သေးတဲ့ လူဝီးဆီယားနားပြည်နယ်မှာ အခြေချပြီး မြေယာလုပ်ငန်းကို အစပျိုးကြပါတယ်။ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ ဖီးလစ် ဟာ လူမည်းကျွန်တွေရဲ့ လုပ်အားကို အသုံးချလို့ အောင်မြင်တဲ့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို တဖြည်းဖြည်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီး ဝက်သစ်ချမြိုင် စံအိမ်ကြီးကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျူးဒစ်ကတော့ ကလေးတွေမွေးရင်း ဝက်သစ်ချမြိုင်စံအိမ်ကြီးရဲ့ သခင်မအဖြစ်နဲ့ လူမည်းကျွန်ပေါင်းများစွာကို အုပ်ချုပ်လို့ အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းပီသစွာနေထိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ သစ်ဖြူတောစံအိမ်က ဂျူးဒစ်ရဲ့ အစ်ကို ကာလက်ဟာ နယူးအော်လီယန်း မြို့သူလေး ဒိုးလားရိစ် ကို လက်ထပ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ စပိန်အထက်တန်းလွှာကပါလို့ ဒိုးလားရိစ်က ဆိုပေမဲ့ အိနြေ္ဒမရတဲ့ နေထိုင်ပုံတွေက ဂျူးဒစ်တို့လို ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိနေထိုင်ရတဲ့ အထက်တန်းလွှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ အံမဝင်နိုင် ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဒိုးလားရိစ်ရဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ဘဝမှန် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာတော့ အေးချမ်းနေတဲ့ ဂျူးဒစ်တို့ ဘဝလေး မုန်တိုင်းဝင်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။
ဒါကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းကြီးရဲ့ ပထမပိုင်း နွေကန္တာ ရဲ့ အကျဉ်းချုပ်ပါပဲ…. နောက်ထပ် ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ မြကတ္တီပါလမ်း မှာတော့ ငွေဝယ်ကျွန်တွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ကာလ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
Related Article >>> လက်ကမချချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် စုံထောက်ဝတ္ထုကောင်း (၂)အုပ်
ဂျုးဒစ် နဲ့ ဒိုလားရိစ် တို့ရဲ့ မျိုးဆက် နှစ်ဦးဖြစ်ကြတဲ့ အန်း နဲ့ ကိုရီမေ ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာ ပြည်တွင်းစစ်မတိုင်ခင်မှာ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေက လူသားနှစ်ဦးပါ။ ဆွေမျိုးတော်စပ်ကြပေမဲ့ မတူညီတဲ့ ဘဝတွေကြောင့် သူစိမ်းတွေလို နေကြတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်နေပါတယ်။
ကိုရီမေဟာ ဆင်းရဲသားဘဝက ဒုက္ခတွေကို ခံစားရင်း အန်း တို့လို မြေရှင်ယာရှင်ကြီးတွေကို မုန်းတီးလို့ “တစ်နေ့ သူတို့ကို အနိုင်ယူရတဲ့သူ ဖြစ်ရပါလို၏” လို့ အမြဲဆုတောင်းနေသူပါ။
ပြည်တွင်းစစ်ကာလအပြီးမှာတော့ အခြေအနေတွေအားလုံး ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားရပြီး မြေရှင်တွေ မွဲပြာကျလို့ အောက်ခြေက လူဖြူတွေကတော့ ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဝက်သစ်ချမြိုင်စံအိမ်ကြီးရဲ့ သခင်မ အန်း ဟာလည်း ဒီစံအိမ်ကြီးနဲ့ မြေယာတွေ တစ်ပါးသူလက်ထဲမရောက်ရစေဖို့ တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးတဲ့အလုပ်တွေ လုပ်ရင်း အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေရရှာပါတယ်။ ဒီအချိန် လူချမ်းသာမလေးဖြစ်နေတဲ့ ကိုရီမေဟာ တစ်ချိန်က ရန်သူတော် အထည်ကြီးပျက် အန်း တို့ မိသားစုကို ကလဲ့စားချေဖို့ ကြံစည်လာတဲ့အခါ …..
တတိယပိုင်း မြကတ္တီပါလမ်းမှာတော့ အန်း ရဲ့ မြေး ကက်စတာ နဲ့ ကိုရီမေ ရဲ့ မြေး အယ်လီနာ တို့ ဖူးစာဆုံကြပြီး ဆွေမျိုးစု ပေါင်းစည်းဖို့ အကြောင်းဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘဝတွေ၊ ရပ်တည်မှုတွေက ခြားနားနေပါတယ်။
ကက်စတာတို့လို ခေတ်ဟောင်း မြေရှင် မျိုးဆက်တွေဟာ မာနကြီးပြီး ယဉ်ကျေးမှုရှိတာကလွဲရင် ဒီခေတ်နဲ့ အံမဝင်တော့တဲ့ အထည်ကြီးပျက်တွေဖြစ်လို့နေပါပြီ။ ကက်စတာတို့ မိသားစုမှာလည်း ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုလို့ ဝက်သစ်ချမြိုင်စံအိမ်ကြီး နဲ့ မြေယာတွေသာ ကျန်နေပါတော့တယ်။
အယ်လီနာတို့ မိသားစုကတော့ အလုပ်ကြိုးစားရင် ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ နေကြတဲ့ ခေတ်သစ်က စီးပွားရေးသမားလူချမ်းသာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ ကတ်စတာနဲ့ လက်ထပ်ပြီး အယ်လီနာဟာ ဝက်သစ်ချမြိုင်စံအိမ်ရဲ့ သခင်မ ဖြစ်လာပါတယ်။ ကတ်စတာဟာ အထည်ကြီးပျက်ပီသစွာ အလုပ်မလုပ်ဘဲ စည်းစိမ်ခံချင်သူဖြစ်နေတာကြောင့် အယ်လီနာ ကပဲ ဝက်သစ်ချမြိုင်စံအိမ်ကြီး နဲ့ မြေယာတွေကို မဆုံးရှုံးရအောင် ကြိုးပမ်းရပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းလိုသူ ခေတ်ဟောင်းအတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ကတ်စတာ၊ ခေတ်အတွေးခေတ်အမြင် အားမာန်အပြည့်နဲ့ အနိုင်မခံအရှုံးမပေးလိုသူ အယ်လီနာတို့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ……
ဒီဇာတ်လမ်းကြီးဟာ ဇာတ်အိမ်ကြီးလွန်းတာကြောင့် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးခြုံငုံမိပြီး ဖတ်တဲ့အခါ အရသာမပျက်စေဖို့ အက်ဒ်မင်ကြိုးစားတင်ပြခဲ့ပေးခဲ့ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ… တကယ်ဖတ်လို့ကောင်းပြီး အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကို ခေတ်အခြေအနေနဲ့ လောကဒဏ်တွေရဲ့ သက်ရောက်ပုံတွေကို လေ့လာခံစားနိုင်မှာမို့ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းရင်း ……
ဘာသာပွနျကိုမှ ဇာတျအိမျကောငျးကောငျးနဲ့ စိတျအာဟာရပေးတဲ့ စာအုပျတှေ ဖတျခငျြတဲ့ ယောငျးလေးတှေ လကျညှိုးထောငျ…
အမြိုးသမီးတှဆေိုတာ ဦးဆောငျနိုငျသူတှမေဟုတျလို့ အိမျထောငျရှငျမကောငျးပီသအောငျပဲ ကွိုးစားသငျ့တယျ ဆိုတဲ့ အယူအဆကို အကျဒျမငျအမွဲ သံသယဖွဈမိတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဦးဆောငျနိုငျတဲ့ အမြိုးသမီးတှဆေိုတာ ကမ်ဘာမှာလညျး အမြားကွီး ရှိခဲ့ဖူးတာ မဟုတျလား…
တဈယောကျယောကျကို အားကိုးပွီး မှီခိုနရောကနေ ရှကေ့နဦေးဆောငျရတော့မယျဆိုတာနဲ့ ယောကျြားသားတှတေောငျ အံ့သွယူရအောငျ အရာရာကို ဦးဆောငျဖွရှေငျးပွသှားတဲ့ မိနျးမတှလေညျး အမြားကွီးမဟုတျလား။
ဒီသဘောကို ကလောငျစှမျးကောငျးကောငျးနဲ့ သရုပျဖျောပွသှားတဲ့ စာရေးဆရာတှဆေိုတာလညျး အမြားကွီးရှိပါတယျ ယောငျးတို့ရေ… အဲ့ဒီအထဲကမှ အမရေိကနျစာရေးဆရာမ ဂှငျး ဘဈစထရို ရဲ့ ဝတ်ထုကို မွနျမာစာရေးဆရာ တငျမောငျမွငျ့ ဘာသာပွနျထားတဲ့ “နှကေန်တာ၊ မွကတ်တီပါလမျးမှသညျ မဟာရံတံတိုငျး ဆီသို့” ဆိုတဲ့ ဂန်ထဝငျဝတ်ထုကွီးအကွောငျးကို ပွောပွခငျြပါတယျ ယောငျးရေ။
ဒီ ဝတ်ထုထဲက ဇာတျဆောငျတှေ ကလညျး အမြားသားပါပဲ။ မြားဆို မိသားစုတဈခုကနေ ပေါကျပှားလာတဲ့ မြိုးရိုးတဈခုက မိနျးမသားတှရေဲ့ စရိုကျအစုံစုံ၊ အရညျအခငျြးအဖုံဖုံ၊ ဘဝရပျတညျမှု အသှယျသှယျကို ဖျောကြူးပွသထားတဲ့ ဝတ်ထုဖွဈနတောကိုး…
တကယျလို့မြား ယောငျးတို့က လရေူးသုနျသုနျဆိုတဲ့ ဂန်ထဝငျဝတ်ထုကို ဖတျဖူးထားရငျ ဒီဇာတျလမျးကို ပိုခံစားတတျမှာပါ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒီဝတ်ထုဟာ လရေူးသုနျသုနျ ဇာတျလမျးထဲကလို အမရေိကနျ ပွညျ တောငျပိုငျးဒသေက မွရှေငျယာရှငျကွီးတှရေဲ့ ခမျးနားကွီးကယျြမှု နဲ့ သူတို့ရဲ့ယဉျကြေးမှုတှေ၊ နထေိုငျမှုတှအေကွောငျးအခွခေံထားတာမို့ပါ။
ဒီဇာတျလမျးမှာတော့ မွရှေငျတှရေဲ့ ယဉျကြေးမှုကွီး စတညျထောငျကာစကာလ၊ အားအကောငျးဆုံးကာလ၊ စတငျပွိုလဲတဲ့ ကာလ နဲ့ ဒီယဉျကြေးမှုကွီးရဲ့ အဆုံးသတျကာလအထိ ရေးဖှဲ့ထားပါတယျ။ နောကျပွီး မွရှေငျ လူဖွူလူခမျြးသာတှရေဲ့ ဘဝ၊ သူတို့နဲ့ မယှဉျသာအောငျ ဆငျးရဲနုံခြာနိမျ့ကလြှတဲ့ လူဖွူအောကျခွလေူတနျးစားတှရေဲ့ ဘဝတှကေိုလညျး တှမွေ့ငျရမှာပါ။
Related Article >>> စုံထောကျဝတ်ထုကောငျး နှဈသကျသူတိုငျးအတှကျ ရနျအောငျရတနာဝတ်ထု
ဇာတျလမျးက ဒီလို စတငျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
ဂြူးဒဈ ဆိုတဲ့ ကောငျမလေး နဲ့ ဖီးလဈ ဆိုသူတို့ ဖူးစာဆုံပွီးတဲ့နောကျ အမရေိကနျနိုငျငံရယျလို့မဖွဈသေးတဲ့ လူဝီးဆီယားနားပွညျနယျမှာ အခွခေပြွီး မွယောလုပျငနျးကို အစပြိုးကွပါတယျ။ အလုပျကွိုးစားတဲ့ ဖီးလဈ ဟာ လူမညျးကြှနျတှရေဲ့ လုပျအားကို အသုံးခလြို့ အောငျမွငျတဲ့ စိုကျပြိုးရေးလုပျငနျးကို တဖွညျးဖွညျး အကောငျအထညျဖျောနိုငျပွီး ဝကျသဈခမြွိုငျ စံအိမျကွီးကို တညျဆောကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဂြူးဒဈကတော့ ကလေးတှမှေေးရငျး ဝကျသဈခမြွိုငျစံအိမျကွီးရဲ့ သခငျမအဖွဈနဲ့ လူမညျးကြှနျပေါငျးမြားစှာကို အုပျခြုပျလို့ အိမျထောငျရှငျမကောငျးပီသစှာနထေိုငျပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ သဈဖွူတောစံအိမျက ဂြူးဒဈရဲ့ အဈကို ကာလကျဟာ နယူးအျောလီယနျး မွို့သူလေး ဒိုးလားရိဈ ကို လကျထပျလာခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ စပိနျအထကျတနျးလှာကပါလို့ ဒိုးလားရိဈက ဆိုပမေဲ့ အိန်ဒွမေရတဲ့ နထေိုငျပုံတှကေ ဂြူးဒဈတို့လို ဗိုငျးကောငျးကြောကျဖိနထေိုငျရတဲ့ အထကျတနျးလှာအမြိုးသမီးတှနေဲ့ အံမဝငျနိုငျ ဖွဈနပေါတော့တယျ။ ဒီလိုနဲ့ ဒိုးလားရိဈရဲ့ ဖုံးကှယျထားတဲ့ ဘဝမှနျ ပျေါပေါကျလာတဲ့အခါမှာတော့ အေးခမျြးနတေဲ့ ဂြူးဒဈတို့ ဘဝလေး မုနျတိုငျးဝငျလာခဲ့ရပါတော့တယျ။
ဒါကတော့ ဒီဇာတျလမျးကွီးရဲ့ ပထမပိုငျး နှကေန်တာ ရဲ့ အကဉျြးခြုပျပါပဲ…. နောကျထပျ ဒုတိယပိုငျးဖွဈတဲ့ မွကတ်တီပါလမျး မှာတော့ ငှဝေယျကြှနျတှကွေောငျ့ဖွဈရတဲ့ ပွညျတှငျးစဈကာလ ရောကျလာခဲ့ပါတယျ။
Related Article >>> လကျကမခခြငျြလောကျအောငျ ဆှဲဆောငျနိုငျမယျ့ စုံထောကျဝတ်ထုကောငျး (၂)အုပျ
ဂြုးဒဈ နဲ့ ဒိုလားရိဈ တို့ရဲ့ မြိုးဆကျ နှဈဦးဖွဈကွတဲ့ အနျး နဲ့ ကိုရီမေ ဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးနှဈယောကျဟာ ပွညျတှငျးစဈမတိုငျခငျမှာ ဆနျ့ကငျြဘကျအခွအေနကေ လူသားနှဈဦးပါ။ ဆှမြေိုးတျောစပျကွပမေဲ့ မတူညီတဲ့ ဘဝတှကွေောငျ့ သူစိမျးတှလေို နကွေတဲ့အခွအေနလေညျးဖွဈနပေါတယျ။
ကိုရီမဟော ဆငျးရဲသားဘဝက ဒုက်ခတှကေို ခံစားရငျး အနျး တို့လို မွရှေငျယာရှငျကွီးတှကေို မုနျးတီးလို့ “တဈနေ့ သူတို့ကို အနိုငျယူရတဲ့သူ ဖွဈရပါလို၏” လို့ အမွဲဆုတောငျးနသေူပါ။
ပွညျတှငျးစဈကာလအပွီးမှာတော့ အခွအေနတှေအေားလုံး ပွောငျးပွနျဖွဈသှားရပွီး မွရှေငျတှေ မှဲပွာကလြို့ အောကျခွကေ လူဖွူတှကေတော့ ခမျြးခမျြးသာသာဖွဈလာကွပါတယျ။ ဝကျသဈခမြွိုငျစံအိမျကွီးရဲ့ သခငျမ အနျး ဟာလညျး ဒီစံအိမျကွီးနဲ့ မွယောတှေ တဈပါးသူလကျထဲမရောကျရစဖေို့ တဈခါမှမလုပျဖူးတဲ့အလုပျတှေ လုပျရငျး အစှမျးကုနျကွိုးစားနရေရှာပါတယျ။ ဒီအခြိနျ လူခမျြးသာမလေးဖွဈနတေဲ့ ကိုရီမဟော တဈခြိနျက ရနျသူတျော အထညျကွီးပကျြ အနျး တို့ မိသားစုကို ကလဲ့စားခဖြေို့ ကွံစညျလာတဲ့အခါ …..
တတိယပိုငျး မွကတ်တီပါလမျးမှာတော့ အနျး ရဲ့ မွေး ကကျစတာ နဲ့ ကိုရီမေ ရဲ့ မွေး အယျလီနာ တို့ ဖူးစာဆုံကွပွီး ဆှမြေိုးစု ပေါငျးစညျးဖို့ အကွောငျးဖွဈလာပါတော့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘဝတှေ၊ ရပျတညျမှုတှကေ ခွားနားနပေါတယျ။
ကကျစတာတို့လို ခတျေဟောငျး မွရှေငျ မြိုးဆကျတှဟော မာနကွီးပွီး ယဉျကြေးမှုရှိတာကလှဲရငျ ဒီခတျေနဲ့ အံမဝငျတော့တဲ့ အထညျကွီးပကျြတှဖွေဈလို့နပေါပွီ။ ကကျစတာတို့ မိသားစုမှာလညျး ပိုငျဆိုငျမှုဆိုလို့ ဝကျသဈခမြွိုငျစံအိမျကွီး နဲ့ မွယောတှသော ကနျြနပေါတော့တယျ။
အယျလီနာတို့ မိသားစုကတော့ အလုပျကွိုးစားရငျ ခမျြးသာမယျဆိုတဲ့ ရိုးရှငျးတဲ့အတှေးအချေါနဲ့ နကွေတဲ့ ခတျေသဈက စီးပှားရေးသမားလူခမျြးသာတှဖွေဈနပေါတယျ။ ကတျစတာနဲ့ လကျထပျပွီး အယျလီနာဟာ ဝကျသဈခမြွိုငျစံအိမျရဲ့ သခငျမ ဖွဈလာပါတယျ။ ကတျစတာဟာ အထညျကွီးပကျြပီသစှာ အလုပျမလုပျဘဲ စညျးစိမျခံခငျြသူဖွဈနတောကွောငျ့ အယျလီနာ ကပဲ ဝကျသဈခမြွိုငျစံအိမျကွီး နဲ့ မွယောတှကေို မဆုံးရှုံးရအောငျ ကွိုးပမျးရပါတော့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ ယဉျကြေးမှုထိနျးသိမျးလိုသူ ခတျေဟောငျးအတှေးအချေါတှနေဲ့ ကတျစတာ၊ ခတျေအတှေးခတျေအမွငျ အားမာနျအပွညျ့နဲ့ အနိုငျမခံအရှုံးမပေးလိုသူ အယျလီနာတို့ ဆနျ့ကငျြဘကျဖွဈလာတဲ့အခါ ……
ဒီဇာတျလမျးကွီးဟာ ဇာတျအိမျကွီးလှနျးတာကွောငျ့ ဇာတျလမျးတဈခုလုံးခွုံငုံမိပွီး ဖတျတဲ့အခါ အရသာမပကျြစဖေို့ အကျဒျမငျကွိုးစားတငျပွခဲ့ပေးခဲ့ပါတယျ ယောငျးတို့ရေ… တကယျဖတျလို့ကောငျးပွီး အမြိုးသမီးတှအေပျေါကို ခတျေအခွအေနနေဲ့ လောကဒဏျတှရေဲ့ သကျရောကျပုံတှကေို လလေ့ာခံစားနိုငျမှာမို့ ဖတျဖွဈအောငျဖတျကွဖို့ တိုကျတှနျးရငျး ……
Tags: Book review, Deep Summer, literature, The Handsome Road, This Side of Glory, Translation